Plastiki Kuwedzera |
Zvishandiso Zvakashandiswa, Zvishandiso, Zvakanakira NezvePurasitiki Kuwedzeredzwa
Plastics extrusion ndeye yakakwira-vhoriyamu yekugadzira maitiro umo mbishi mapurasitiki anonyungudika uye kuumbwa kuita inoenderera chimiro. Extrusion inogadzira zvinhu senge pombi / tubing, mamiriro ekunze, tambo, dhiketi maturu, mafafitera ewindo, mafirimu epurasitiki uye kujekesa, machira e-thermoplastic, uye waya insula ...
Iyo yekuumba nzira hombe dhayamita epurasitiki pombi uye nekutsvaga kwayo
Nekuvandudzwa kweyepiipi yekufambisa indasitiri, izvo zvinodikanwa pombi yekufambisa chinzvimbo chiri kuwedzera nekukwirira, uye kushandiswa kwehombe-dhayamita repombi repurasitiki kuri kuwedzera nekuwedzera. Iko kutsvagisa nekusimudzira kwehukuru-dhayamita repurasitiki pombi ne ...
PTFE Ram Inowedzera Mutsara
ne admin pane 20-06-20
Gondohwe extruder chinhu chinodhonza uko, pachinzvimbo che extrusion screw, gondohwe kana plunger inoshandiswa. Iyo gondohwe extruder ndiyo yekutanga extruder inoshandiswa muindasitiri yepurasitiki. Aya maitiro akajairwa anoshandiswa kugadzira maprofiles, sleeve, tsvimbo, block, tubing, lining sheet bar, etc. Iyo gondohwe extrusio ...
Maitiro akaomesesa epurasitiki extrusion uye zvainoita
ne admin pane 20-05-01
Plastic extrusion ndeimwe yeanonyanya kufarirwa maitiro mumaindasitiri mazuva ano. Kana zvasvika pakushambadzira, pane chikonzero chekuwana mukana kune unogadzira tsika. Vagadziri vepurasitiki ava vanogadzira zvinoshamisa mapurasitiki emarudzi ese. Chinangwa ndechekuona kuti vatengi vavo vari kukwanisa ...
PTFE Lining Muchina
Zvakanakira: * Chengetedza nguva nemari; * Kufambira mberi kwakagadzirwa; * Yakakwira kuburitsa; * Kuderera kwesimba kushandiswa;…. Iyi PTFE lining muchina ndeye kuburitsa PTFE lining machubhu, Inoramba yakagadzikana gondohwe kumhanya uye inogadzira chaiyo yepamusoro polymer lining Tube zvigadzirwa. nehunyanzvi hwedu hwepakutanga. Iyo polymer lini ...
PTFE yakatwasuka gondohwe extruder
ne admin pane 20-03-04
PTFE yakatwasuka gondohwe extruder vauya muyakaenzana saizi ye25-Ton, 50-Ton, 75-Ton, uye 100-Toni yekukanda, ine sitiroko kureba kwe36 ″, 54 ″, 72 ″, 108 ″ uye Yenyika Yakarebesa Stroke Extruder . Izvi zvinobvumira kugadzirwa kusingaenzanisike muindasitiri. Inopa Nyika '...